Monday February 25, 2019 - 06:29:22 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeymo bahalnimo oo diyaaradaha dagaalka dowladda Mareykanka ay xalay ka geysteen deegaanno katirsan gobolka Sh/Hoose ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.
Duqeymahu xalay saqdii dhexe ayay ka dhaceen deegaanka Kuunya Barrroow, deegaanka Dacaaraha iyo degmooyinka Janaale iyo Awdhgeele oo dhammaantood kawada tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, Alle Mahaddii wax khasaara ah kama dhalan duqeymaha badankood marka laga reebo deegaanka Kuunyo Barroow oo laba qof ay ku dhinteen.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in diyaaradaha Mareykanka ay si bareer ah uduqeeyeen guryo ay dad shacab ah deganyihiin iyo goob ganacsi, canug yar oo umusha lagula jiray islamarkaana dhallanaa 20 maalmood oo qura iyo Macallin dugsi Qur'aan ayaa ku dhintay duqeymaha.
Warbaahinta islaamiga ah oo saaka markii uu waagu baryay gaartay goobaha laduqeeyay ayaa soo qaadday sawirro muujinaya goobaha labeegsaday iyo khasaaraha shacabka gaaray, wararku waxay sheegayaan in diyaaraduhu ay bartilmaameedsadeen Madarasa diini ah iyo Labaajooyin gaadiidka lagu dhaqo oo dad shacab ah leeyihiin iyo sidoo kale guryo dad shacab ah deganaayeen.
Cannuga yar ee dhintay hooyadii dhashay ayaa sidoo kale ku dhaawacantay gantaalladii ay tuurayeen diyaaradaha Mareykanka, Macallinka dugsi Qur'aan ee dhintay ayaa jiifay isbitaalka Guud ee Kuunyo Barroow waxaana haleelay gantaal ay tuurayeen diyaaradaha dagaalka Mareykanka.
Wararka ayaa intaas ku daraya in duqeymo kale ka dhaceen Janaale,Awdheegle iyo deegaanka Dacaaraha balse majirin wax khasaara ah oo ay geysteen, dad farabadan oo dhaawacyo qaba ayaa ladhigay Isbitaalka degmada Kuunya Barroow. waxaa jira burbur xooggan oo soo gaaray dhismayaal ganacsi iyo guryo shacab deganyihiin oo dhammaantood kuyaal Kuunyo Barroow.
Diyaaradaha xasuuqan geystay ayaa kasoo duulay garoonka Melleteriga Balidoogle oo uu kuyaal saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanku ku leeyihiin dalka Soomaaliya, dowladda Mareykanka ayaa xasuuq ku heyso shacabka Soomaaliyeed iyadoo marmarsiimo ka dhiganaysa ladagaallanka Al Shabaab waxaana muuqata in waxa ay gummaadeyso ay yihiin dad Birimageyddo shacab ah.